Yusuf Garaad: Shil Madaxweyne - QEYBTA LABAAD
Shil Madaxweyne - QEYBTA LABAAD
Baabuur SBS ah ayaan qaadannay qado aan guryahayaga ka soo cunnay ka dib. Waa Landrover, midabkiisu yahay kan calanka. Ay labada albaab ee hore dushooda uga xardhan tahay saddex xaraf SBS. Iyada oo dhammaystiran, Somali Broadcasting Service ay uga qoran tahay labada dhinac. Dusha ay ka saran yihiin dhowr sameecadood oo waaweyn oo midabka dambaska leh oo sii kala jeeda.
Albaabka ugu gadaale haddii aad ka soo gasho waxaa ku rakiban Studio cod iyo shanqarba lagu duubi karo, lagu tifatiri karo lagana sii deyn karo. Waxaa u dheer mikrofoonno iyo qalabka duubista iyo xarkahooda oo dhaadheer oo meel baabuurka ka fog cod looga soo qaadi karo sida fagaarayaasha la isugu soo baxo iyo garoommada cayaaraha.
Waa baabuur ka tilmaaman magaalada iyo dalka badankiis, inta badan aan booliiska waddooyinku joojin, laga celin waddo xiran, aan su’aalo badan la weydiin haddiiba ay dhacdo in wax la weydiiyo. Weliba waxaa dhacda in shacabka qaarkii ay soo eegaan dadka la socda gaariga bal in ay arkaan weriyayaal caan ah. Marka aad gaarigaas saaran tahay waxaad tahay saaxiibka qof kasta aqoo ama ha aqoon. Marka uu istaago isgoys ama baabuur kale aad la siman tahay, qofkii doono ayaa ku salaamaya ama wax ku weydiinaya. Waa carwo furan.
Waa hubka ugu culus ee Radio Muqdisho iyo Radio Hargeysa, labada Radio ee keliya ee dalka oo mararka qaarna la isku sidko sida idaacadda siddeedda fiidnimo oo warka Muqdisho uu labadaba toos uga baxo. Radio Muqdisho waxaa laga dhegeysan jiray Soomaaliya oo dhan, dalalka deriska ah iyo Khaliijka. Wuxuuna ku hadli jiray 9 af oo kala duwan.
Waxaan u amba baxnay xerada Afisyoone. Ciidan badan oo kala duwan ayaa deggan, waxaana ugu badan ciidanka Cirka oo ay xarun u tahay. Waa sababta ay magaca Afisyoone u qaadatay oo laga wado Aviation ama Aviazione. Waa meel dhowr boqol oo tallaabo u jirta guriga aan ku dhashay iyo Dugsigeyga Xannaanada ee Xamar Jajab. Waa xaafad xusuus gaar ah ii leh.
Qol dhululubo oo kale ah oo dhinac u yuuban ayaa la fariistay. Inteenna weriyayaasha ah, Radio Muqdisho, Wakaaladda wararka SONNA, TV-ga Qaranka iyo Wakaaladda filimmadu annaga oo taagtaagan waxaan u dhowaannay darafka miiska ee uu fadhiyo Madaxweynuhu. Dhanka derbiga ayaan u dhowaaney marka laga reebo qolyaha Kamerooyinka oo aan cidina qoonsaneyn meel kasta oo qolka ka mid ah oo ay maraan ama ay istaagaan marka ay doonaan.
Madaxweynaha labada garab waxaa fadhiya Maxamed Cali Samatar iyo Xuseen Kulmiye Afrax. Maaddaama uu berigaas habmaamuuska liiska Madaxda loo kala hormariyo ama loo fariisto uu ahaay wax aan innaba lagu khaldami karin, waxaan is iri Wasiirrada qaarkood barta ay fadhiyaan waa nooc muddaaharaad ah oo tilmaami kara sida aanay ugu wada qanacsaneyn dhismaha Goluhu sida uu yahay.
Markii la fariistay nin caato ah ayaa soo galay oo mid mid u xaadiriyay Madaxda isaga oo ka billaabay Maxamed Cali Samatar. Wasiirrada qaarkood xataa marka magacooda la yeeriyo iyaga oo aan soo eegin dhinaca magacooda looga dhawaaqay ayay cod nuxuus ah ku sheegayeen in uu isaga yahay magaca lagu dhawaaqay - waa i kan ama waan joogaa, ayuu falceliska badankiis ahaa.
Xataa waxay gaartay in Madaxweynuhu soo dhex galo oo ninkii magacyada xaadirinayay uu ku yiraahdo war bal u kaadi. Jaallayaal ninkii magaciisa lagu dhawaaqo gacanta ha taago oo cod xayi ah ha ku yiraahdo waa i kan. Ilbiriqsiyo waxaan soo xusuustay sidii ay noola hadli jireen saraakiishii iyo sarkaal xigeenkii nagu tababbaray Dugsiga militeriga ee Xalane.
Xataa markii uu Madaxweynuhu sidaa yiri, waxaan maqli karay gunuunuc hoose. Dabcan nin kastaa kuma dhicin anshaxa-darrada noocaas ah in laga dareemo meel Madaxweynuhu fadhiyo. Ama aan si kale u dhahee, ogaalkeyga ninna kuma dhici jirin shilka ka hor.
Markii xaadirinta la soo gebagebeeyay waxaa soo galay nin kutub sita oo aan u maleynayo in uu ahaa Shiikh Cali-Salaad. Allah hortiisa ayuu ku dhaariyaya iyada oo kaameridu ay markhaati ka tahay. Afar afar iyo shan shan ayuu u dhaariyay Wasiirrada. Sidoo kale wuxuu dhaariyay Wasiir-ku- Xigeennadii oo aan ka xusuusto Nuuro Shire oo aan isku Kulliyad ahayn oo markaa uun ku biirtay Golaha Wasiirrada.
Intaas ka dib Madaxweynaha ayaa hadalka qaatay. Anigu waxaan taagan ahay meel qiyaasta xusuusteyda u jirta laba ama saddex tallaabo.
Kuwo Lagu Nasto
Madaxweynuhu maba leexleexan. Waxaad moodda in uu i ogyahay sababta aan u imid oo aniga uun iiga jawaabayo su’aasha madaxeyga ku jirta, laakiin aanan faruuryaheyga soo marin.
Xuseen Kulmiye oo garab fadhiya ayuu tilmaamay. Wuxuu yiri aniga iyo Xuseen ayaad is leedihiin iyaga ayaa idiin hor dhiman doona adinka oo ka eegaya in aan annagu idiinkugu da’ weyn nahay.
Laakiin waxaan idiin sheegayaa aniga waxaa ii dheer dhaawicii beri dhoweyd i gaaray. In aad dareemeysaan ma aqaan, ayuu yiri, laakiin haddadaas aan idinla hadlayo carrabka ayaa i culus.
Dhakhaatiirtii i soo daweysay waxay igula taliyeen marka aan dalka ku laabto in aan muddo nasto oo aanan wax shaqo ah qaban. Waa kuwan ayuu yiri dhakhaatiirteydu isaga oo gacanta ku taagaya dhanka ay fadhiyeen Wasiirro aan u maleynayo in ay ahaayeen Dr. Munasar iyo Dr. Gabboose. Weydiiya ayaga haddii aad doontaan.
Taladii dhakhaatiirta uma uu hoggaansamin Maxamed Siyaad sida uu isaguba sheegay. Wuxuu yiri, markii aan gegida dayaaradaha ka soo degey xafiiska ayaan toos u fariistay oo shaqo ayaan billaabay aniga oo aan gurigeyga ku leexan. Sababta oo ah howlaha ii yaallay dartood ayaa damiirkeygu ii diiday in aan nasto.
Waxaan idinka rajeynayaa kuwii aan ku nasto in aad nqotaan, ayuu raaciyay.
Waxaa kale oo aan idiin sheegayaa ayuu yiri waxaa maanta keenay in munaasabadda dhaarta aan diidno Madaxtooyada in lagu qabto oo aan u doorbiday Afisyoone.
Sababtu waxay tahay sannadihii ugu horreeyay Kacaanka waxaan ku shiri jirnay halkan. Waxa aan go’aansannaana waa ay noo qabsoomi jireen.
Waxaan marka doorbiday afisyoone aniga oo rajo ka qaba in go’aammadeennu ay fulaan sidii berigiii uu Kacaanku cusbaa.
Madaxweynuhu laba jeer ayuu maalintaa galay waxa ay ciyaal xamarku ugu yeeraan qatif oo uu khadka ka dhacay. Ma ahayn wax weyn laakiin waxay markhaati u ahaayeen xaaladdiisa caafimaad ee uu isaguba tilmaamay iyo waxyaabo uu malahaa gocanayay.
Munaasabaddu markii ay dhammaatay ayaa loo baxay deyradda. Sida geedaha teel teelka ah ee meesha ku yaallay ayaa koox koox loo istaagay laba laba, saddex saddex iyo afar afar. Waa loo adeegayaa oo waxaa lala dhex meerayaa cabitaan iyo gowsqabsi u badnaa sandwich iyo macmacaan.
Waxaan galab gaabkii ka soo carraabay aniga oo ka walaacsan xaaladda aan soo arkay. Ay igu taagan tahay dalku xasillooni ma ku sii socon doonaa? Amniga ka sokow, waxaa igu taagnayd qalin jebinteyda Jaamacadda oo ay bilo yari iiga harsanaayeen. Qalinjebintu waxay markaas ii ahayd waxa caalamkeyga ugu muhiimsan. Marka aan hadda dib uga fekero, waxaa walaaca igu dhaliyay ma ahayn keliya waxa aan fadhiga kala kulmay ee waxaa maskaxdeyda qeyb ku lahaa hugunka magaalada oo dhinac ay saameyn ku lahaayeen mucaaradku.
Awoodda siyaasaddu waa laba. Waa awood dhab ah oo gacantaada ku jirta iyo midda lagaa aamminsan yahay. Haddii ay labadu iskabi waayaan, mid ahaan sida ay kuugu meel martaa waa ay adag tahay.
Intii maalintaa ka dambeysay, waxaan qabaa in Maxamed Siyaad awooddii uu dalka ku lahaa aanay sideedii ku sii socon. Waxaan qabaa in ay dad kale ay si uun ula qeybsadeen awoodda. Ha noqdo go’aan ay ku dhaliyeen, oggoleysiiyeenna ama ha noqoto howlo ay fuliyeen ogaal la’aantiisa ugu yaraan marka hore.
Waxaa kale oo aan qabaa in labadii garab ee ay Dowladdu u qeybsanayd, aanay huri weyto ma ahane mar dambe dib isula shaqeyn si kal iyo laab ah, xataa markii ay noqotay in ay isla qaxaan. Waa markii ay dhimbilihii nimankii magaca Jabahadaha watay ee buuraleyda naga soo galay ay sida daadkii ku soo rogmadeen xeebtan Xamar.
Aragtideydu waxay ku saleysan tahay waxyaabaha ii muuqday oo la mid ah sawirro aan badneyn oo marba meel laga qaaday oo aan muuqaal buuxa bixin karin. Waa sida qof mugdi jooga oo iftiinka hillaaca wax ku arka.
Taxanahan labada qeybood ah halkaan ayuu ku eg yahay.
Waxaan hubaa in ay joogaan dad badan oo iiga xog ogaalsan iigana dhowaa xuddunta ay go'aammadu ka soo fuliyeen iyo dariiqyada ay ka soo aroortay xogta lagu saleeyay tallaabooyinka la qaaday ama laga baaqsaday in la qaado. Qofka ama hey'adda xogta keentay iyo sida loo lafa-guray.
Qof kasta oo xog-ogaal ah oo aan damiirkiisu u diideyn, sida Dhakhaatiirta Madaxweynaha daaweyay, yeerayaa in uu reebo dhaxalka taariikheed ee dalka macaan iyo qaraar midka uu leeyahay si uu noogu sahlo in khaladdaadkii shalay aan maanta dib loogu laaban.
Sawirrada goos gooska ah ee aniga daaqadda iiga muuqday qaarkood waxaan ku soo gudbin doonaa qormooyin kale. Insha Allah.
Posted by Yusuf Garaad at 06:54:00
Siddeed Qormo Siddeed Maalmood Gudahood
Rabbiile Good iyo Safarkeennii Kismaayo
Jengeli iyo Masalle
Samatar iyo Cabdiraxmaan Jaamac
Jees iyo Masalle - QEYBTA LABAAD
Jees iyo Masalle - QEYBTA KOOWAAD
Ka hor Shilka Madaxweynaha
Wareysigeygii Jaalle Siyaad
Kulankeygii Koowaad ee Jaalle Siyaad
Kacaanka Nooli Keyd ha Reebo
Beel mise Khibrad iyo Aqoon?
Soohdinta Sarkaalka Dadweynaha ee Xilliga Doorasha...
Ka Dhowrso Ololaha Doorashada!
Gobollada Soomaaliya tan iyo Xorriyaddii 1960